I-Reuben Yonatan's Articles on Martech Zone |
Imibhalo nge URuben Yonatan
U-Reuben Yonatan ungumsunguli kanye ne-CEO ye I-GetVoIP, insiza yokuqhathanisa ye-VoIP esiza izinkampani ukuthi ziqonde futhi zikhethe isixazululo sokuxhumana kwebhizinisi ngezidingo zabo ezithile. U-Reuben usiza ama-SMB aqondise isu lebhizinisi nesiko futhi athuthukise ingqalasizinda yebhizinisi iyonke. Mlandele kuTwitter @ReubenYonatan
Uzehlisa Kanjani Izindleko Zokutholwa Kwekhasimende Le-ROI Ephezulu
NgoLwesibili, Okthoba 26, 2021 NgoLwesibili, Okthoba 26, 2021 URuben Yonatan
Uma usaqala ibhizinisi, kuyalingeka ukuheha amakhasimende nganoma iyiphi indlela ongakwazi ngayo, ngaphandle kwezindleko, isikhathi, noma amandla ahilelekile. Nokho, njengoba ufunda futhi ukhula uzoqaphela ukuthi ukulinganisa zonke izindleko zokutholwa kwamakhasimende ne-ROI kubalulekile. Ukuze wenze lokho, uzodinga ukwazi izindleko zokutholwa kwekhasimende (CAC). Uzibala Kanjani Izindleko Zokutholwa Kwekhasimende Ukuze ubale i-CAC, udinga nje ukuhlukanisa konke okuthengiswayo kanye